एंकर न्युज कभर स्टोरी उकेरा अपडेट शिक्षा प्रदेश अर्थतन्त्र ओप-एड उकेरा टीभी फोटो कथा राशिफल स्वास्थ्य उकेरा काेलम करियर उकेरा फिचर उकेरा जुनियर सिफारिस कलासंसार शब्दमाला खेलकुद उकेरा कार्टुन राजनीति
आय–आर्जनको क्षेत्रमा समस्या आउन सक्छ। जताततै जटिलता पन्छाउनु पर्दा दिमागी बोझ बढेको महसुस हुने छ। खर्चमा वृद्धि हुने छ।
साता त्यति उत्साहवर्द्धक देखिँदैन। धनागमको मात्रा घट्नेछ। भाग्यले साथ कमैमात्र दिनेछ। दाम्पत्य सुख सोचेजस्तो नहुन सक्छ। स्वास्थ्य तथा खानपानमा कमजोरी रहला। तर, अन्तिमका दुई दिन कार्यमा सफलता दिने खालका हुनेछन्।
पेशा/व्यवसाय : कार्यक्षेत्रमा यश कीर्तिमा कमी आउने छ। कामको चाप र दबाब बढ्ने छ। अनावश्यक यात्रा हुनसक्ने र त्यसमा पनि कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। महिनाको दोस्रो हप्ताको अन्त्यतिरबाट बाधा व्यवधानमा वृद्धि भएको महसुस हुने छ।
आर्थिक : आर्थिकरूपमा महिना खासै उपयुक्त देखिँदैन। आकस्मिकरूपमा कतैकतैबाट धन हातमा आइहाले पनि टिक्न गाह्रो हुने छ। प्राप्त धनले समस्याको समाधानमा ठोस योगदान नदिन सक्छ।
स्वास्थ्य : स्वास्थ्य प्रतिकूलतातर्फ जान सक्छ। थकानले सताउने छ। स्फूर्ति घट्ने छ। आन्द्रामा समस्या आउने देखिन्छ। ग्यास्ट्रिकको समस्या हुनेहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने छ।
शिक्षा : शिक्षा क्षेत्रमा अनेक बाधा व्यवधानको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ। पढाइमा जाँगर नजान सक्छ। आलस्यताले पढाइ बिगार्ने छ। अरु मानिसको नचाहिँदो व्यवहारले पनि पढाइमा समस्या निम्तिन सक्छ। परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन मुस्किल पर्ने छ।
पारिवारिक जीवन तथा प्रेम : स्थानान्तरण हुने सम्भावना छ। गरगहना तथा घरमा काम लाग्ने भाँडाकुँडा जोहो गर्ने खालको समय छ। विपरीत लिंगीको भरपुर सहयोग मिल्नुका साथै प्रेम सम्बन्धमा गाढापन आउने छ। असमझदारी बढिरहेका युगल जोडीहरूको भने असमझदारीमा झनै वृद्धि हुन सक्ने छ भने नयाँ प्रेमीको खोजीमा रहेकालाई मिल्ने सम्भावना देखिँदैन।
ठूलाबडाको आशीर्वाद प्राप्त भए तापनि झट्ट काम फत्ते भइहाल्ने स्थिति छैन। केही धैर्यताको आवश्यकता पर्ने छ। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहन सक्छ।
साता अनुकूल नै देखिन्छ। उचित धनार्जन हुनेछ। कारोबारमा वृद्धि हुनेछ। दाम्पत्य सुखमा वृद्धि हुनेछ। आँटेका कार्यहरू केही विलम्बताका साथ सफल हुनेछन्। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। सन्तानसँग कुरा बाझिन सक्छ। शिक्षामा कमजोरी रहला। अन्तिम दुई दिन निराशाजनक सावित हुनेछन्।
पेशा/व्यवसाय : राज्यभय बढ्ने छ। सफलता पाउन निकै मेहनत गर्नु पर्ने छ। सीपको कमी महसुस हुने छ। प्राविधिक सामानहरू, जस्तै : कम्प्युुटर आदिले धोका दिन सक्छ। पुरुषहरूलाई महिला वर्गबाट सावधान रहनु पर्ने खालको समय छ।
आर्थिक : खर्च बढ्ने छ। आर्थिक कठिनाइको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। खर्च अभावमा कामहरू रोकिन सक्छ। वैदेशिक धन प्राप्त हुने समय छ। नियमित आम्दानी गर्नेहरूलाई भन्दा अनियमित र अनिश्चित आम्दानी गर्नेहरूका लागि समय अनुकुल छ। तर, गैरकानुनी काममा असफलता हात लाग्ने छ।
स्वास्थ्य : मानसिकरूपमा केही भयले सताउने छ। अशान्त भइने छ। सामान्य बिरामी भइन सक्छ। महिनाको आरम्भमा स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला।
शिक्षा : पढाइमा बौद्धिक क्षमताको वृद्धि भए पनि अलमल बढ्ने छ। नयाँ कुराको सिकाइमा मन नजान सक्छ। परीक्षा–प्रतियोगितामा राम्रै प्रदर्शन गरिने छ। भाग्यको भरोसामा नबस्नु नै उपयुक्त हुने छ।
पारिवारिक जीवन तथा प्रेम : विपरीत लिंगीप्रतिको आकर्षण केही घट्ने छ। जीवनसाथीको रुखो बोली सुन्नु पर्ने हुन सक्छ। सन्तान पक्षबाट पनि खासै सन्तोषजनक स्थिति देखिँदैन। प्रेममा धोका खाइने वा अनावश्यक मानसिक तनाव झेल्नु पर्ने देखिन्छ।
भाग्यले साथ दिन कठिन देखिन्छ। घुमफिरमै दिन बित्न सक्छ। परीक्षा–प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा मन खिन्न हुने छ। स्वास्थ्य कमजोर रहला।
साता मिश्रित फल दिने खालको देखिन्छ। धनार्जनमा केही विलम्ब हुनसक्छ। अपचले स्वास्थ्य कमजोर गराउनेछ। शिक्षामा प्रगतिका लक्षणहरू देखिन थाल्नेछन्। साहसमा वृद्धि हुनेछ। काम एकैपटकको प्रयासमा नबन्न सक्छ।
पेशा/व्यवसाय : अनुहारमा कान्ती घट्ने छ। कार्य क्षेत्रमा अपमान सहनु पर्ने देखिन्छ। यात्रामा कठिनाइको सामना गर्नु पर्ला। अरुको सहयोगको खासै आश नगर्नु नै उपयुक्त होला। महिनाको तेस्रो साताको सुरुवाततिर गाउँघर तथा कार्यालय आदिमा सामान्य नेतृत्वदायी भुमिका मिल्न सक्छ। साथै कठिनाइमा पनि केही कमी महसुस हुने छ।
आर्थिक : व्यापार–व्यवसाय आदिमा सुरुमा मन्दी सहनु पर्ने देखिन्छ। आर्थिकरूपमा खासै प्रगतिदायक समय छैन। तथापि महिनाको दोस्रो सातापछि केही प्रगति अवश्य देखा पर्ने छ। धनी मान्छेहरूसँग उठबस बढ्ने र उनीहरूको सहयोगले लाभ मिल्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्य : पेटको समस्याले सताउने छ। शरीरको अन्य पक्ष भने सन्तुलनमै रहला। ठूलो रोग भने लाग्ने छैन।
शिक्षा : शिक्षामा खासै प्रगतिदायक समय देखिँदैन। आफ्नो मुल विषयबाट ध्यान अन्तै भड्किन सक्छ। गूढ रहस्यहरूमा मन जाने देखिन्छ। स्व–अध्ययनबाट ज्ञानमा भने केही वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ।
पारिवारिक जीवन तथा प्रेम : पारिवारिक जीवनमा तर्क–वितर्क बढ्ने छ। तथापि समस्याहरू हल भएर जानेछन्। हरेक समस्याको कुनै न कुनै निराकरण मिल्ने छ।
चतुर्याइँले लाभ प्राप्त हुने खालको दिन छ। राति अनेक सपनाले निद्रा बिगार्न सक्छ। चिन्ता बढ्ने छ। अज्ञात भयले सताउने छ। अरुले निचो व्यवहार गर्न सक्छन्।
साताको सुरुवातमा सामान्य रहे तापनि मध्य सातादेखि दिनहरू राम्रा देखिन्छन्। भाग्यले साथ दिनेछ। शिक्षामा कमजोरी महसुस हुनेछ। स्वास्थ्य तन्दुरुस्त रहला। ऋणको काम बन्नेछ। व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ। सुरुका दिनमा महत्त्वपूर्ण कार्यमा रोकावटको सामना गर्नुपर्ला।
पेशा/व्यवसाय : अनेक दुःख र झञ्झटबाट मुक्त भइने खालको समय छ। शत्रुमाथि प्रहार गरेको निशाना ठाउँमै लाग्ने छ। दिग्विजयी भइने छ। पद–प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने छ। राज्य–प्रशासनसँगको सम्बन्ध झांगिने छ। सेना तथा प्रहरीमा हुनेहरूलाई बढुवा वा प्रोत्साहन मिल्न सक्छ। दोस्रो सातापछि लोकप्रियतामा पनि सामान्य वृद्धि हुने छ। भाग्यले साथ दिने छ।
आर्थिक : केही मात्रामा धनको जोहो हुन सक्छ। प्रतिकूल समय खासै छैन। धनको क्षेत्रमा निराश हुनु पर्ने देखिँदैन। गुप्त स्रोतहरूबाट, कमिसन आदिको कामबाट, विदेशबाट धनागम हुन सक्छ।
स्वास्थ्य : रोगमाथि विजय प्राप्त हुने छ। मानसिक अशान्तिबाट मुक्त भइने छ। मन प्रफुल्ल रहने छ।
शिक्षा : बौद्धिक क्षमतामा असाधारण वृद्धि हुने छ। सैद्धान्तिकरूपमा आफ्नो चिन्तन र बुद्धिमा स्पष्टता आउने छ। परीक्षा–प्रतियोगिता आदिमा सफल भइने छ। गुरुजन तथा ठूला मान्छेको साथ मिल्ने छ।
पारिवारिक जीवन तथा प्रेम : तेस्रो साताको सुरुवाततिरबाटै प्रेमीजन नहुनेहरूले नयाँ प्रेमी पाउने देखिन्छ। गर्भवतीहरूलाई सन्तानको जन्ममा सहजता हुने छ। पारिवारिक जीवनमा माधुर्यता छाउने छ।
व्यापारमा वृद्धि हुने छ। धनागमको क्षेत्रमा गरिएका प्रयासहरू फलिभूत हुने दिशातर्फ जानेछन्। विलासितामा मन जान सक्छ। वाहन सुख मिल्ने छ।
साता सामान्य प्रकृतिको छ। पारिवारिक मिलनले मन हर्षित र प्रफुल्ल रहला। धनागम हुनेछ। नयाँ सम्पत्ति तथा वाहन जोडिने समय छ। शिक्षामा कमजोरी रहनेछ। स्वास्थ्य सामान्य रहला। मनमा सन्तोष छाउनेछ।
पेशा/व्यवसाय : शत्रुहरूले बाधा खडा गर्न खोज्ने छन्। महिनाको दोस्रो हप्तापछि भने अपमानको समेत सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धामा पछि परिने खालको स्थिति निर्माण हुने देखिन्छ।
आर्थिक : आर्थिकरूपमा खासै उपलब्धिमूलक देखिँदैन। काममा अड्चन आउनाले धनमा वृद्धि हुने छैन । खर्चमा वृद्धि हुने छ।
स्वास्थ्य : स्वास्थ्यमा विकार आउने छ। तथापि ठूलो रोगले सताइहाल्ने स्थिति देखिँदैन।
शिक्षा : शिक्षामा राम्रो प्रगति गर्न सकिने छ। परीक्षा–प्रतियोगितामा उत्साहजनक प्रदर्शन गर्न सकिने छ। बुद्धिको विकास हुने छ। स्मरण शक्ति पनि बढ्ने छ।
पारिवारिक जीवन तथा प्रेम : दाम्पत्य जीवनमा अनावश्यक वादविवाद बढ्ने छ। सन्तानसँग पनि कुरा नमिल्ने देखिन्छ। जीवनसाथीको आकर्षक सुन्दरता मूल्यहीन लाग्ने छ।
वैदेशिक पक्ष सबल रहला। स्वास्थ्य समस्या निराकरण उन्मुख हुने छ। धनको कारोबारमा सफल भइएला। विजयी भइने छ।
अध्ययनमा मन जानेछ। आफ्नो प्रभावमा वृद्धि हुनेछ। आँट साहसमा वृद्धि हुनेछ। धैर्यताको मात्रा बढ्नेछ। सन्तान सुखमा वृद्धि हुनेछ। दाम्पत्य मनमुटाव भएमा सुधार हुँदै जानेछ। खर्चको मात्रा बढ्नेछ। धनागम सोचेजति नहुन सक्छ।
पेशा/व्यवसाय : पेशा व्यवसाय सामान्य ढंगले चल्ने छ। कारोबारमा भने अलिक सुस्तरूपमा गति देखिने छ। सम्पत्तिको कारोबारमा सफल भइने छ। सम्पत्ति बिक्री हुन सक्छ।
आर्थिक : महिनाको पछिल्लो खण्डमा धनमा केही कमी आउने छ। खर्च बढ्ने छ। मन अस्थिर हुँदा खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुने छ।
स्वास्थ्य : रोग बढ्ने छ। पेटको समस्याले सताउने छ। मध्य मासपछि चिन्ता बढ्ने देखिन्छ। जोर्नीहरूको दुःखाइ तथा रोगले सताउने छ।
शिक्षा : परीक्षा–प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सकिने छ। तथापी आलस्यता त्याग्नु पर्ने छ। पढाइमा मनलाई एकाग्र राख्न केही मुस्किल नै देखिन्छ।
पारिवारिक जीवन तथा प्रेम : दाम्पत्य सुखभोगमा मासको सुरुवातमा अनावश्यक बाधा अड्चन आउने छ। कुटुम्ब सुखमा पनि खासै राम्रो लक्षण देखिँदैन। पारिवारिक सद्भाव सामान्य मात्रै रहला।
अलमलमै दिन बित्न सक्छ। जाँगरको अभाव रहला। महत्त्वपूर्ण कार्यमा रोकावटको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सामान्य प्रतिकूलता मिल्ने छ। खानपानमा सजग रहनुपर्ला।
खर्चमा वृद्धि हुनेछ। आकस्मिक धनागम भइहाले पनि आर्थिक अभावको महसुस भैरहनेछ। खानपानमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनावश्यक नबोल्नु नै वेश होला। सुरुका दिनमा स्वास्थ्य केही कमजोर रहला। पराक्रममा वृद्धि हुनेछ।
पेशा/व्यवसाय : पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने छ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुने छ। तर, आफ्नो विगतको गलत कर्मले आफैलाई लखेट्न सक्छ। नयाँ–नयाँ साथीहरू बन्नाले कार्यक्षेत्रमा केही सहजता मिल्ने देखिन्छ।
आर्थिक : धनागम हुनेछ। सुख–सुविधामा वृद्धि हुने छ। कारोवारमा पनि वृद्धि हुने छ। नियमित आम्दानी गर्नेहरूलाई लाभका अनेक द्वारहरू सिर्जना हुनेछन्। पहिल्यैदेखी आम्दानीको कमी रहेकालाई भने सामान्य राहत मात्रै मिल्नेखालको समय छ।
स्वास्थ्य : स्वास्थ्य समस्याहरू निराकरण उन्मुख देखिन्छन्। तथापि मासको मध्यपछि भने पेटमा खराबी आउने छ। आँखाको समस्याले पनि सताउने छ।
शिक्षा : शिक्षामा निकै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिने छ। भाग्यले साथ दिने छ। तर, तयारी गर्ने समयमा अल्छी गरे सजाय पनि मिल्न सक्छ।
पारिवारिक जीवन तथा प्रेम : मासको मध्यपश्चात दाम्पत्य जीवनमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ। अनावश्यक वादविवाद बढ्ने र ठूलै झगडाको रूप लिन सक्ने देखिन्छ।
दिन खासै सफल हुने खालको देखिँदैन। समस्या र चिन्ताले सताउने छ। अरु मानिसहरूप्रति शंका बढ्ने छ। आफन्तबाटै धोका हुन सक्छ।
इज्जत मान सम्मान तथा प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। आफन्तहरूले घरमा आएर तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन्। ख्याती बढ्नेछ। स्वास्थ्य तन्दुरुस्त देखिन्छ। साताको अन्त्यमा खर्च बढ्नुका साथै बोलीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पेशा/व्यवसाय : सुखमा कमी महसुस हुने छ। कुनै कुरामा भ्रममा परिन सक्छ। तथापि तेस्रो सातापछि विरोधी तथा शत्रुहरूलाई किनारा लगाउँदै विजयी भइने छ।
आर्थिक : धनको क्षय हुने छ। सम्पत्ति गुम्ने छ। तथापि आकस्मिक धनागम हुनेखालका योगहरू पनि प्रबल छन्। व्यापारमा वृद्धिकारक नै समय मान्नुपर्छ। नयाँ लगानी गर्न त्यति उपयुक्त देखिँदैन।
स्वास्थ्य : आँखाको समस्या हुनेहरूलाई अलिक नराम्रो समय छ। शरीरमा जलन बढ्न सक्छ। खासै ठूलो समस्या भने व्यहोर्नु नपर्ला।
शिक्षा : शिक्षामा अत्यन्त नराम्रो समय छ। पढाइमा मन एकाग्र गर्न निकै कठिन हुने छ। महत्त्वकांक्षी योजनाहरू मनमा खेलिरहनाले पनि पढाइमा अवरोध आउने छ।
पारिवारिक जीवन तथा प्रेम : घरमा बोली रुखो भएर जाने छ। मधुरताको कमी रहन सक्छ। दाम्पत्य जीवन स्थिर नै देखिन्छ।
शुभ समाचार मिल्ने छ। मन प्रफुल्ल हुँदै जाने छ। भोगविलास तथा मनोरञ्जनका अवसरहरू प्राप्त हुने छन्। कार्यमा सफलता मिल्ने छ।
साताको सुरुवातमै आयआर्जन हुने र त्यसपछि खर्चको मात्रा बढ्नेछ। मध्य सातामा केही निरशताले सताए पनि समग्रमा तपाईंका लागि अनुकूल नै समय देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा केही बिलम्ब हुनेछ। प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनुका साथै सम्मानमा वृद्धि हुनेछ।
पेशा/व्यवसाय : यात्रामा कठिनाइको सामना गर्नु पर्ने छ। यश–कीर्तिमा कमी आउने छ। सम्बन्धहरूमा असमझदारी बढ्ने छ। आफ्नै लेखाइ वा बोलाइले समस्या निम्त्याउन सक्छ।
आर्थिक : धनको कमी हुने छ। धनको क्षेत्रमा गरिएका यावत प्रयासहरू खेर जान सक्छन्। खर्चमा वृद्धि हुने छ।
स्वास्थ्य : शरीर थकित हुने छ। आन्द्रालगायत भित्री अंगहरूले राम्रोसँग काम नगर्न सक्छन्। शिरमा दुःखाइ बढ्न सक्छ। माइग्रेनको समस्या हुनेहरूलाई पिरोल्न सक्छ।
शिक्षा : प्राविधिक विषयको पढाइ गर्नेहरूलाई राम्रो समय छ। उत्कृष्ट नतिजा हात पर्ने छ। सैद्धान्तिक विषयको पढाइ गर्नेहरूलाई भने समस्या निम्तिन सक्छ।
पारिवारिक जीवन तथा प्रेम : सन्तानको चिन्ताले सताउने छ। सन्तानसँगको सम्बन्धमा पनि उतारचढाव आउने छ। पारिवारिक जीवन सामान्य रहला।
दिन असफलतातर्फ प्रेरित हुँदै गएको देखिन्छ। धनको अभाव खड्कने छ। खर्चमा वृद्धि हुने छ। तर्क–वितर्कमा फसिने छ। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहला।
धनागम हुनेछ। हरेक कार्यमा केही अवरोधको सामना गर्दै सम्पन्नतातर्पm अघि बढिनेछ। राज्य पक्षबाट उचित सहयोग मिल्नेछ। सुरुवातमा आय आर्जन हुनेछ भने साताको अन्त्यमा खर्च बढ्नेछ। अध्ययनमा मन भड्किन सक्छ।
पेशा/व्यवसाय : अनैतिक कार्यमा फसिने छ। नैतिक र चरित्रवान कार्यमा भने वृद्धि हुने छ। जुनसुकै पुण्य कर्मको फल प्राप्तिमा धैर्य राख्नुपर्ने देखिन्छ। शत्रुलाई पाखा लगाउन सफल भइएला। अपमान गर्नेहरू आफै थच्चिने छन्। तेस्रो साताबाट खराब व्यक्तिसँगको संगत बढ्ने छ।
आर्थिक : धनको क्षेत्रमा सामान्य सफलता मिल्ने छ। विदेशबाट प्रशस्त धनागम हुनेखालको समय छ। स्वदेशमा भने मुस्किलको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्य : तेस्रो साताबाट पेट खराब भएर जाने छ। ज्वरो आउन सक्छ। स्वप्नदोषमा वृद्धि हुने देखिन्छ।
शिक्षा : पढाइमा मन लगाउन निकै गाह्रो देखिन्छ। बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुने छ। चतुर्याइँ बढे पनि औपचारिक शिक्षाको क्षेत्र भने खस्किन सक्छ।
पारिवारिक जीवन तथा प्रेम : दाम्पत्य जीवनमा मिश्रित फल मिल्ने छ। प्रणय सम्बन्धमा उतारचढावको स्थिति देखिन्छ। पारिवारिक जीवन बोझिलो बन्ने छ।
जुनसुकै क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व बढाउन सफल भइने छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुने छ। अरु मान्छेलाई सजिलै आफ्नो वशमा राख्न सफल भइएला।
साता जति लाभकारी हुनुपर्ने हो त्यति लाभ दिने देखिँदैन। धनागमका केही अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। कार्यक्षेत्रमा बाधा अवरोध सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ। भाग्यले फ्याट्ट साथ दिइहाल्छ नि भनेर आश गर्ने खालको समय छैन।
पेशा/व्यवसाय : पद–प्रतिष्ठा तथा मान–सम्मानमा वृद्धि हुने छ। पुण्य कर्म गर्न मन लाग्ने छ। तेस्रो साताबाट आँट–साहसमा वृद्धि हुने छ। शत्रुमाथि सजिलै विजय प्राप्त गर्न सकिएला। केही अपमान तथा निच व्यवहारको सामना गर्नु पर्ने भए तापनि त्यस्ता व्यवहार गर्नेहरू आफै पाखा लाग्दै जानेछन्। आफ्नो बोलीलाई अरुले गलत अर्थ लगाइदिन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला।
आर्थिक : आर्थिक पक्ष महिनाभरी नै निकै सबल बन्ने देखिन्छ। विविध क्षेत्रबाट लाभ मिल्ने योग छ।
स्वास्थ्य : रोगबाट छुटकारा मिल्दै जाने छ। तथापी तेस्रो साताबाट शरीरमा दुःखाइ बढ्ने छ। रिस–आवेगमा पनि वृद्धि हुने छ।
शिक्षा : विद्यामा सामान्य कमजोरी महसुस हुन सक्छ। परीक्षा–प्रतियोगितामा सोचेजस्तो प्रस्तुति दिन असमर्थ भइने पो हो कि !
पारिवारिक जीवन तथा प्रेम : पारिवारिक जीवन सामान्य बित्ने छ। शय्या सुखमा कमी रहन सक्छ। प्रणय सम्बन्ध केही बोझिलो पो हुने हो कि !
जिद्दीपना बढ्ने तर काममा भने आलस्यताले गाँज्ने खालको दिन छ। खर्चमा वृद्धि हुने छ। कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक किचलो र आरोप सहनुपर्ला।
साताको सुरुवात त्यति उत्कृष्ट देखिँदैन। भाग्यले साथ नदिन सक्छ। लघुताभाषले सताउला। स्वास्थ्यमा केही कमजोरी रहला। पेट खराब हुनेछ। मध्य साताबाट प्रगति हुनेछ। चिताएका कार्यहरू सम्पन्न हुँदै जानेछन्। धनार्जन तथा रोजगारीका अवसरहरू हात पर्नेछन्।
पेशा/व्यवसाय : विरतापूर्ण कार्यमा सफलता मिल्ने छ। सम्पूर्ण कामहरू सफलतातर्फ जानेछन्। सरकारी कामबाट विशेष लाभ मिल्ने छ। अधिकारी वर्गको विशेष साथ र सहयोग पाइएला। महिनाको तेस्रो साताबाट भने कार्य संघर्षका साथ सफलतातर्फ जाने छ।
आर्थिक : धनको क्षेत्र सकारात्मक दिशामा जानेछ। विपुल वृद्धि नभएता पनि सामान्य वृद्धि नै हुने खालको समय छ। गुमेको धन फिर्ता हुने छ।
स्वास्थ्य : स्वास्थ्य सबल भएर जाने छ। रोगहरू निको हुने छन्। तेस्रो साताबाट भने केही थकित भइन सक्छ। अग्निभयले सताउन सक्छ। अनावश्यक रिस उठ्ने छ।
शिक्षा : शिक्षामा सामान्य प्रगति हुने छ। औपचारिक अध्ययनभन्दा अनौपचारिक अध्ययनमा विशेष दख्खल बढ्ने छ। बौद्धिक क्षमतामा भने विशेष वृद्धि हुने छ। बुद्धिको बलमा उत्तीर्ण गर्नु पर्ने परीक्षाहरूमा विशेष सफलता मिल्ने छ।
पारिवारिक जीवन तथा प्रेम : प्रणय सुखमा वृद्धि हुने छ। नयाँ प्रेमी मिल्न सक्छ। प्रणय सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्ने निश्कर्षमा पुगिने छ। महिनाको तेस्रो साताबाट भने घरमा बोलिवचन रुखो भएर जान सक्छ।